အဆင့်တန်းရှိရှိ တစ်ယောက်ချင်းထိုးဖို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် လိပ်လိုခေါင်းဝှက်ပြီး သတ္တိကြောင်နေတဲ့ မင်းအုပ်စိုးရဲ့ အကြောင်းစုံကို ချပြလာတဲ့ Hugo(မိန်းကလေးလောက်ပဲ ထိုးရဲပြီး ဂုဏ်စာနေသူကြီးလေ) – All Update News
အဆင့်တန်းရှိရှိ တစ်ယောက်ချင်းထိုးဖို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် လိပ်လိုခေါင်းဝှက်ပြီး သတ္တိကြောင်နေတဲ့ မင်းအုပ်စိုးရဲ့ အကြောင်းစုံကို ချပြလာတဲ့ Hugo(မိန်းကလေးလောက်ပဲ ထိုးရဲပြီး ဂုဏ်စာနေသူကြီးလေ)
အဆင့်တန်းရှိရှိ တစ်ယောက်ချင်းထိုးဖို့ စိန် ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ပြင်တောင်မထွက်ရဲဘဲ သ တ္တိကြောင်နေတဲ့ မင်းအုပ်စိုးရဲ့အကြောင်း စုံကို ချပြလာတဲ့ Hugo
လူငယ်သရုပ်ဆောင်နဲ့ မော်လ်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hugo ကတော့ အကျဉ် းထောင်ကပြန်ထွက်လာပြီး အရင်ကထက်ရိုင်းစိုင်းလာတဲ့ မင်းအုပ်စိုးကို စိန်ခေါ်ပြီးတစ်ယောက်ချင်း လက်ဝှေ့ထိုးဖို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Hugo က မင်းအုပ်စိုးကို ကြိုးဝိုင်းပေါ်မှာ အဆင့်တန်းရှိရှိစိန်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် မင်းအုပ် စိုးဘက်က လမ်းဘေးမဟုတ်ရင် သူ့ရဲ့နေ အိမ်ကိုပဲအတင်းခေါ်နေတဲ့အကြောင်းကို Hugo က ပြောပြလာပါတယ်။
“ဦးမင်းအုပ်စိုးရေ! Hugo ဆိုတဲ့ ၂၁ နှစ်သားကောင်လေးကအမြဲ Cage ပေါ်ကိုတလေးတစားနဲ့ဒဲ့စိန်ခေါ်နေကြကောင်​ေလ​ပါ သိတဲ့သူတွေကောင်းကောင်းသိတယ်! ပြီးတော့ ထမိန်အောက်ကလက်သီးထုတ်ပြတဲ့လူစားမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူးနော်!
သိက္ခါရှိရှိ Cage ပေါ်ကို စိန်ခေါ်ခဲ့တာပါ အဲ့အတွက် အခုခင်ဗျား လက်ခံလိုက်ပီဆိုတော့ ကျနော်ဝမ်းသာအားရ ပွဲစီစဉ်သူကိုအပူသွားကပ်နေတာလေ တခုသိထားပါ Fighter တျောက်က Cage ပေါ်မှာပဲ By 1 ထိုးတယ် Cage အောက်မှာ ထိုးရင်အဲ့ကောင် အဆင့် အတန်းမရှိတဲ့စောက်ပေါပဲ ဆိုပီးကျနော်တို့သင်ခဲ့ရတယ်ဗျ! ဦးလေးက အိမ်အထိခေါ်နေတယ်ဗျာ မစားနဲ့!
Dec 10 ရက်နေ့အတွက် YES or No ပဲ လုပ်ပေးပါ Yes ဆိုလဲ ထိုးကြမယ်စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန် ဘယ်ကောင့် ပိုင်နက်မှမဟုတ်တဲ့ Cage ပေါ်မှာ No ဆိုလဲ Its Ok အခြားကျနော်နဲ့ဆော့ဖို့ ပြောထားတဲ့ညီကိုတွေနဲ့ဆော့မယ် ရှင်းတယ်”
“အခုခင်ဗျားပြောတာက မသိရင်သွေးကြောင်လို့ပဲ ခင်ဗျားခြံထဲမလာသလိုလိုနဲ့ ဒီ စကားတွေကို Private ပြောချင်ပေမဲ့ ခင်ဗျားက Ment လဲပိတ် Add တာလဲ လက်မခံ Msg ကပြောတော့လဲ မရ ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ တကောင်တည်းပွဲတိုင်းကိုကျော်ဖြတ်လာတာ ခင်ဗျားကခြံထဲကို ထိုးဖို့ခေါ်တာလေဗျာ
စဉ်းစားကြည့် ဆောက်ရူးပဲလာမယ်! ၁၀ ရက်နေ့ကလဲ ကျနော် ၁ ကောင်တည်းလာမှာ ပွဲမဖြစ်ရင် ပရိတ်သတ်ကိုအားနာစရာကြီး Cage ပေါ်မှာပဲ မျှမျှတတဆော့ကြတာပေါ့ ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေပစေ Hugo သွေး ကြောင်တဲ့ထုံးစံတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဗျာ ဒီနေ့ December ၁၀ ရက်နေ့ Cage ပေါ်စည်းကမ်းတကျ ထိုးဖြစ်မထိုးဖြစ် ကျနော့ကိုပြောပါ မထိုးဖြစ်လဲ Its Ok
ပရိတ်သတ်ကလဲ ကျနော့စကားကျနော် တည်တယ်ဆိုတာသိထားပေး သူ့ဘက်က လက်မခံခဲ့ရင် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပီး ကျနော့ကို ထပ်မမေးပါနဲ့တော့ သူ့ဘက်က NO ဆိုတော့ ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ ” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Hugo ကတော့ အဆင့်တန်းရှိရှိ စိန်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် မင်းအုပ်စိုးဘက်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ စကားအမျိုးမျိုးပြောပြီး ကြိုးဝိုင်းထဲလာဖို့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Source: Hu Go’s fb
credit myanmar cele times
Previous Article နာမည်ရေးနည်း မြန်မာဗျည်းသက်သက်(၃၂) လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့နေရာမှာ အခုအချိန်ထိ စဉ်း စားနေရတုန်းလား မပူနဲ့တော့ ရော့ဒီမှာ ကျနော်နဲ့အတူတူ လေ့လာကြရအောင်
Next Article သွေးသားရင်းမဟုတ်ပဲ တစ်ရွာလုံးရုပ်ချင်းဆင်နေပြီး အမွှာကျေးရွာပုံစံဖြစ်နေသည့် ထူးဆန်းသော ရွာငယ်လေး(တခုခုတော့ တခုခုပဲ ဘာလဲ သိချင် ဝင်သာဖတ်သွားနော်)